Btc Clicks မှာဝင်ငွေရှာနည်း ~ Earning Online Myanmar
Home » How To Earn » Btc Clicks မှာဝင်ငွေရှာနည်း
Btc Clicks မှာဝင်ငွေရှာနည်း
Free7Movies6:11:00 AM 16 comments
အရင်းနှီးမလိုပဲတစ်နေ့ကို(၁၅)မီးနစ်အချိန်ပေးပြီး ရွှေလိုတန်ဖို့ရှိတဲ့ Bitcoin ရှာကြရအောင်... အားလုံးမင်္ဂလာပါ ချစ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ရယ် ဒီနေ့ ကမ္ဘာကြီးမှာခေတ်စားနေတဲ့ Online ဝင်ငွေရှာနည်းတွေကို ကျွန်တော်တို့မြန်တွေလည်းကမ္ဘာနဲရင်ဘောင်တန်းလို့ Online မှာပိုက်ဆံရှာနိုင်အောင်ဆိုပြီး ၊ ကျွန်တော်လည်း ပိုက်ဆံရှာနည်းတွေကို အားလုံးသဘောပေါက်နားလည်အောင်ပုံတွေနဲ့တကွသေသေချာချာရေးသားတင်ပေးနေပါတယ် ၊ Online မှာနည်းပညားတွေကိုလေ့လာရင်း ဝင်ငွေရှာနိုင်ကြပါစေဗျာ.... ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပေးမှာကတော့ Btc Clicks မှာဝင်ငွေရှာနည်း ဖြစ်ပါတယ် ဒီကောင်လေးရဲအားသာချက်က $0.10 ဆိုရင်အစမ်းထုပ်ယူနိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထုပ်ပြီးပါပြီ နောက်တစ်ခုက ပိုက်ဆံထုပ်ရင် 19 နာရီဘဲကြာတယ်ဗျာ အရမ်း မှန်ကန်တိကျတဲ့ဆိုက်ကောင်းလေးတစ်ခုပါဗျာ မိတ်ဆွေတို့အားလုံးလည်းဒီဆိုက်လေးကိုလက်မလွတ်ပါစေနဲ့ ၊ အားလုံးဘဲလုပ်တတ်ကိုင်အောင် အောက်မှာလေ့လာလိုက်ကြပါဗျာ.......
အရင်ဆုံး Btc Clicks မှာဝင်ငွေရှာဖို့အောက်ကပုံကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင်အောက်ပုံမှာပြထားသလို Login/Signup ဆိုတာကိုမောစ်တင်လိုက်ပါ ပြီးရင် Earner Signup ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
အောက်ပုံမှာလိုမိမိ Gmail ကိုထည့်ပါ Captcha မှာအမှန်ခြစ်လေးပေါ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
အပေါ်ကပုံ Captcha မှာအမှန်ခြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးမိမိတို့ကွန်ပျူတာမှာ မိမိတို့ Gmail ကိုဝင်ထားပါ ၊ မိမိတို့ကွန်ပျူတာမှာ Gmail ဝင်လို့မရှိရင် I'm notarobot ဆိုတဲနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ ပုံလေးတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ် အဲမှာပုံတူလေးတွေကိုနှိပ်ပေးရပါတယ်။
အပေါ်ကပုံမှာလို I'm notarobot မှာအမှန်ခြစ်ပြီဆိုရင် Sign Up ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ အောက်ပုံကိုဆက်ကြည့်ပါ။
အပေါ်ကပုံလိုပေါ်လာရင် verify လုပ်ရန်မိမိတို့ Gmail ကိုသွားလိုက်ပါ အောက်ပုံကိုဆက်ကြည့်ပါ။
အပေါ်ကပုံမှာကျွန်တော့ Gmail ကို Btc Clicks ကပို့ထားဒါ နှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါ အောက်ပုံကိုဆက်ကြည့်ပါ။
အပေါ်ကပုံမှာလို verify ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ အောက်ပုံကိုဆက်ကြည့်ပါ။
အပေါ်ကပုံမှာလိုမိမိ Gmail နဲ့အဲဒါဆို မိမိအသုံးပြုမည့် Password ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင်နံပါတ်2မြှားပြထားတဲ့နေရာမှာအမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင် Start Earning Bitcoins ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ အောက်ပုံကိုဆက်ကြည့်ပါ။
အပေါ်ကပုံမှာလိုပေါ်လာရင်မိမိ Btc Clicks Account ကိုပိုက်ဆံရှာဖို့ Login ဝင်နိုင်ပါပြီ အောက်ပုံကိုဆက်ကြည့်ပါ။
အပေါ်ကပုံမှာပြထားသလို Login/Signup ဆိုတာကိုမောစ်တင်လိုက်ပါ ပြီးရင် Earner Login ဆိုတာ ကိုနှိပ်လိုက်ပါ အောက်ပုံကိုဆက်ကြည့်ပါ။
အပေါ်ကပုံမှာလို မိမိ Gmail နဲ့ Password ကိုထည့်ပြီး Log In ဝင်လိုက်ပါ အောက်ပုံကိုဆက်ကြည့်ပါ။
အပေါ်ကပုံမှာလိုမိမိ Btc Clicks Account ကိုရောက်သွားရင် ပိုက်ဆံရှာဖို့ အပေါ်မှာမြှားပြထားတဲ့ Surf Ads ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ အောက်ပုံကိုဆက်ကြည့်ပါ။
အပေါ်ကပုံမှာမိမိ Click ရမဲကြော်ငြာတွေကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ် အပေါ်ကကြော်ငြာကို Click လိုက်ပါ အောက်ပုံကိုဆက်ကြည့်ပါ။
အပေါ်ကပုံလိုပေါ်လာရင်အမှန်ခြစ်ပေါ်အောင်လုပ်ပါ ပြီးရင် Submit ကိုနှိပ်လိုက်ပါ အောက်ပုံကိုဆက်ကြည့်ပါ။
အပေါ်ကပုံလိုပေါ်လာရင် မိမိ Btc Clicks Account ကိုပိုက်ဆံရောက်သွားပါပြီ အဲဒိစာမျက်နှာကိုပိတ်နိုင်ပါပြီ ကြော်ငြာနောက်တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်ပါ အောက်ပုံကိုဆက်ကြည့်ပါ။
အပေါ်ကပုံလိုပေါ်လာရင် +ပေးရမှာလား - ပေးရမှာလားသေသေချာချာကြည့်ပါ ပုံမှာလို 17+9 အဖြေကို နံပါတ် 1 မြှားပြထားတဲအကွက်လေးမှာရေးထည့်ပါ ပြီးရင် Submit ကိုနှိပ်လိုက်ပါ အောက်ပုံကိုဆက်ကြည့်ပါ။
အပေါ်ကပုံလိုပေါ်လာရင် မိမိ Btc Clicks Account ကိုပိုက်ဆံရောက်သွားပါပြီ အဲဒိစာမျက်နှာကိုပိတ်နိုင်ပါပြီ ကြော်ငြာတွေအကုန်လုံးကိုဒီလိုနည်းနဲ့ကုန်အောင် Click ပေးလိုက်ပါ။
အပေါ်ကပုံမှာလို ကြော်ငြာတွေအကုန်လုံးကို Click ပြီးရင်မိမိရဲ့ Dashboard ကိုပြန်သွားလိုက်ပါ
ဒီလိုနေ့တိုင်း Click ပေးပါ။
Ref ဝယ်ယူနည်းကို အောက်မှာလေ့လာလိုက်ပါ။
အပေါ်ကပုံမှာလိုမိမိတို့မှာ ပိုက်ဆံ $0.30 လောက်ရပြီဆိုရင် Ref ဝယ်ဖို့ my Balance မှပိုက်ဆံတွေကို P Balance သို့ပြောင်းရအောင်မြှားပြထားတဲနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ အောက်ပုံကိုဆက်ကြည့်ပါ။
အပေါ်ကပုံမှာလိုနံပါတ် 1 မြှားပြထားတဲ့အကွက်ထဲမှာမိမိပြောင်းလိုတဲပမာဏကိုရေးထည့်ပါ ပြီးရင်နံပါတ်2မြှားပြထားတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ အဲဒါဆိုပြောင်းပြီသွားပါပြီ အောက်ပုံကိုဆက်ကြည့်ပါ။
အပေါ်ကပုံမှာလို Ref ဝယ်ရန် မြှားပြထားတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါ အောက်ပုံကိုဆက်ကြည့်ပါ။
အပေါ်ကပုံမှာလိုနံပါတ် 1 ဝယ်ယူလိုတဲရက်ကိုရွေးပါ။
2 Ref အရေတွက်ကိုရွေးပါ။
4 Pay Now
အဲဒါဆိုဝယ်ပြီးပါပြီ Ref ကို ၈း၀၀ နာရီကြာမှတစ်ခါဝယ်ခွင့်ပေးပါတယ် ပြီးရင်ဝယ်ယူဖို့အတွက်အချိန်အတိကျစောင့်ပေးရပါတယ် ဒါလေးကိုတော့စိတ်ရှည်ပေးဖို့လိုတယ်။
ကဲဒီလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်လောက်ပါပြီနော်နားမလည်တာရှိရင်လည်း Comment မှာမေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆိုက်ကပိုက်ဆံကိုတော့ Bitcoin Account တစ်ခုနဲထုပ်ယူရပါတယ်။ Bitcoin Account ဖွင့်နည်း BITCOIN WALLET ACCOUNT တစ်ခုပြုလုပ်နည်း ကို >>>ဒီမှာဝင်<<<လေ့လာလိုက်ပါ။ ပိုက်ဆံထုပ်ယူနည်းကိုတော့နောက်မှတင်ပေးပါမယ် အားလုံးဘဲလုပ်တတ်ကိုင်တတ်ပြီးပိုက်ဆံများများရလို့ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ........ ကိုမောင်မောင်
Blogger September 5, 2017 at 5:15 AM
BitsForClicks isalarge Bitcoin Get-Paid-To website on which you can to get paid in Bitcoins just for viewing ads and participating in micro jobs.
Blogger September 5, 2017 at 6:03 AM
Blogger September 11, 2017 at 8:42 AM
Blogger September 11, 2017 at 6:48 PM
Blogger November 1, 2017 at 4:09 AM
Have you ever consider maximizing your free BTC collections withaBITCOIN FAUCET ROTATOR?
Blogger November 15, 2017 at 2:45 AM
Blogger November 16, 2017 at 12:24 AM
Blogger November 28, 2017 at 3:02 AM
Free money November 28, 2018 at 1:44 AM
Free money November 28, 2018 at 7:06 AM
Moe Htet Arkar December 2, 2018 at 4:54 AM
Moe Htet Arkar December 2, 2018 at 4:58 AM
Mgmauktheinkha December 22, 2018 at 1:08 AM
Best New Movies December 29, 2018 at 7:15 PM
ဟုတ်တင်ပေးပါမယ် နည်းနည်းစောင့်ပေးပါ။ အလုပ်မအားသေးလို့
ဆက်လုပ်နေပါ မပူပါနဲ့ တင်ပေးမယ်။
Mgmauktheinkha March 8, 2019 at 12:16 AM
အကိုရေbtcclicksမှာrent referralsနဲ့ရှာတာလေတင်ပေးပါကျနော် ၁၀referralsဝယ်ထားပင်မဲ့ပိုက်ဆံကတိုးမလာလို့အကို
myanmar generation March 31, 2019 at 9:47 PM
2FA code မေ့သွားလိုပါ ဘယ်လို့ ပြန်ဝင်ရမှာလဲ aliveforothers@gmail.com မေလ် ပို့ပေးပါလာခင်ဗျာ